Carrot timphahla tekubhukusha amantombazane ngezandla (isithombe)
Yini kungaba lula ngaphandle imvunulo isanqante? Ungathenga ngomumo eyenziwe noma aqashiwe. Kodwa lutho ukuqhathanisa imizwelo yimbangela ejwayelekile - production ahlangene suit ku isihlahla sikaKhisimusi.
Zokugqoka kusiza ingane ukuthuthukisa umcabango wabo, umcabango, ikhono lokusungula. Futhi lokho ongaqhathaniswa injabulo umphumela - inkulumo yakho ikhange futhi Christmas izingubo, okuyinto nakanjani kungabikho muntu.
Nge suit isanqante, ungakwazi unamathisele ingane ukudla okunempilo, ukuze popularize enempilo, chaza izinzuzo imifino, amavithamini kuzo. Ngisho noma ungakaze udliwe ingane izaqathe, ngemva kokusebenza ndawonye ukudalwa suit kaNcibijane, akakwazi ukusiza kodwa ukuthandana nalo zemifino.
Ngaphezu kwalokho, lokhu okudingeka bashintshashintshe ngayo ngubo: suit isanqante suit for amantombazane nabafana. Phela, phansi-ke, namahlumela kuyo le mpande zingenziwa njengoba isiketi noma ibhulukwe kanye capes.
Lapho ukudweba imibono?
Ugqozi isenzo uqobo isanqante. Ungakwazi ukuthatha yemifino, silihlobanise ndawonye nengane yakho. Ukudonsa ingane ukuxhumana umama kungayilungisa ulwazi lwakhe mayelana ukunambitheka kanye nezinzuzo izaqathi.
Ungafunda incwadi ndawonye, ukubukela opopayi, phequlula izithombe.
Ungase futhi upheke ukudla okumnandi, ukubhaka ikhekhe isanqante, ukuze ingane Cishe waqaphela ukuthi isanqante - iqhawe, okufanelekelayo ukuba ube khona likaKhisimusi.
Umqondo esigabeni wokulungiselela - nengxoxo exhumana mayelana isanqante kanye nenzuzo yayo. Vumela ingane ichaza yemifino, yini umbala, ijamo, iziphi izingxenye ezingafani nalezo esizithola nezinye imifino. Futhi umbuzo obalulekile yilona indlela acabanga suit izaqathi.
Mina amkhipha amehlo kulokho obekungokuka ...
Ngenxa yalokho, umntwana ngokwakhe uyoba bathi izaqathe suit kudingeka imibala emibili eyisisekelo: phansi orange ukwenza esigaxeni, futhi eziqongweni green.
Ngokuqinisekile amantombazane ikhabethe ukuthola izinto umbala: ingubo orange, sundress noma isiketi kanye ihembe eliluhlaza, isigqoko, isikhafu, scarves, bakhothame. Konke lokhu kungenxa ukufaka zenganekwane, ingasetshenziswa ekulungiseleleni imvunulo.
Thunga suit ngezandla zakhe izaqathe ngesankahlu. Ungathola izibonelo umsebenzi ngisho iphethini kubo, kanye imiyalelo namathiphu onobuhle ekuhlanganiseni futhi ethunga izingubo.
Ukulungisa phansi isudi, okungukuthi, kakhulu izimpande, ungasebenzisa noma yikuphi ukuma. Ungakwazi ukushiya oda ekhona ngaphandle kwezinguquko noma sheathe obomvu, ophuzi noma orange lezimbali zawo.
Foam kungaba ngesisekelo ivolumu imvunulo. Kusukela ucezu usayizi oyifunayo ubude kanye nobubanzi is tapered izaqathe phansi.
Ingathunyelwa phezu Indwangu Ithungelwe noma isiketi egcwele, sundress noma cape ukuphakama kwakhe ngokugcwele. Kusukela ngezansi, ungakwazi ukufaka i-band nokunwebeka kanye silingo kancane. Noma Indwangu phansi usike nhlangothi zombili nesigaxa, like a zemifino impande.
Wonder Foam impahla
Foam - impahla esihle womshini elisekela isudi. Kuvele esiteji ebalulekile umsebenzi iba kwesigaba kwesokudla impahla. Kubalulekile usike ndawo engela ngokuphelele flat.
"Moment 1" kufanelekile gluing zonke izinjongo ingcina. Ezigcotshwe zombili, imizuzu 5-7 ukuze ome, bese kancane cindezela futhi twist ngokulinganayo ukusabalalisa ingcina ngabamba. Yenza noma yini udinga ngokushesha nangokunembile.
Imisebenzi gluing Foam kufanele prodelyvat omdala, ukuze ngingasebenzisi ukulimaza impilo womntwana.
Ingabe kuphela amboze ngendwangu isudi.
Ukuze isanqante imvunulo yaqedwa, njengoba oluhlaza, ungasebenzisa ngomumo eyenziwe into ikhabethe lwentombazane noma iyiphi umthunzi Indwangu oyifunayo thunga bibs, isikhafu, bakhothame.
Phezulu zingafakwa ekhanda njengoba isigqoko oluhlaza, ngomnsalo noma ayindilinga namahlamvu ezifanayo ukuthi zingenziwa noma iyiphi impahla: indwangu, amakhadibhodi, nemiklamo oluhlaza.
Inguqulo lula we suit isanqante
izingubo Isetshenziswa ukuthi iyatholakala. orange Ngokwesiko phansi, phezulu oluhlaza. Futhi ekhanda ngumuntu ukugoqa emaplastikini lacinile nobe ebhokisini abarimi, ukubeka umdwebo umqhele noma isicelo - isithombe izaqathi. Kungenzeka futhi ukunamathisela isigqoko oluhlaza wenza isanqante izicubu. Noma ku esifubeni nge izithombe colorful ukunamathisela zemifino.
Ungenza imvunulo isanqante kubhasikidi izingxenye ezintathu eziyinhloko.
isiketi Brown amagwebu base amahanisi-ehlombe ezizibeni lizofana ngobhasikidi. Izaqathe kakhulu kungaba ihembe orange. Green ithiphu - cap, isikhafu noma ama-ribbon.
On the sibheke phansi
Futhi ungakwazi ngempela lula suit isanqante ngezandla zakhe. I umnqwazo isenzo njengoba rhizomes. Lokhu kungenziwa Isigaxa emise isigqoko noma ikepisi, eyenziwe Foam zenjoloba, ezinemibala amakhadibhodi, noma ngesineke.
Futhi eziqongweni ukukhonza njengephayona ingubo eluhlaza noma iqoqo blouses ibhulukwe, okuzokwenziwa ehlotshiswe nemiklamo oluhlaza neminsalo.
isanqante imvunulo for abancane
Sekuwumkhuba ukuhlela sicu photo. Lokhu othanda ikakhulukazi omama abasebasha ukukwenza. Ungase uyibone ngeso lengqondo ingane yabo eside elindelwe nganoma iyiphi indlela.
Kulula ukwenza suit isanqante sokuba namantombazane njalo ngezandla zabo. It zingahlanganiswa izinaliti ntambo orange noma indwangu thunga kusuka kunoma iyiphi abavamile isanqante imvilophi.
Njengoba ukusetshenziswa Topper isigqoko nge Pom-poms.
Futhi yini ngithi Santa Claus?
On iholide ingane kaNcibijane uzokwazi ngokwanele ukumela isudi yakhe izaqathi. Photo ubonisa imizwa acacile ingane. Into esemqoka - ungakhohlwa uthwebule.
Ukuze isethulo imvunulo ungacabanga fun inganekwane yesehlakalo nezinye izinhlamvu, ezifana beet, ukhukhamba, uphizi oluhlaza, noma ufunde inkondlo:
On izingane uthukuthele,
Angifuni ukuba adle,
Bukani zonke candy.
Futhi zonke amavithamini kimi
Kuphela awabonakali kwaphezulu.
Uma ningithanda -
Lokho kuyoba bephilile futhi benamandla!
Izingane ukuza namuhla
Ngezinye isihlahla Unyaka omusha.
Ngifuna ukukutshela imfihlo
Zonke uhlala nami okungenani iminyaka eyikhulu.
Ukuze ukhule smart uqine.
Umthetho eyinhloko womshini imvunulo izaqathe - ukumelana inhlanganisela yemibala emibili: isiphunzi orange kanye eziqongweni green. A ukusetshenziswa iziphi izinto, izilinganiso zobukhulu kanye namathuluzi ngezabelo, kuncike fantasy.
Bese ngesikhathi likaKhisimusi, iholide photo shoot ekwindla noma umntwana ozithandayo kuyoba amahle kakhulu.
Calzedonia sezimpahla zokubhukuda: Ubuhle sicasulwa
Ukukhetha zezingane izikibha
Okufanele Gqoka a yenkampani
Abesifazane elingenamikhono ku sintepon - lo mkhuba isizini
Kusukela sizogqokani isiketi ezifincizekile ezifana nezimpiko ngezansi kwedolo - ikakhulukazi izincomo wochwepheshe kanye nokubuyekeza
Inthanethi esitolo zokugqoka imfashini zabesifazane - awuthengi, futhi Kujabulisa ngempela!
Ingaphakathi Neoclassical: kanjani ukwakha igumbi design esiyingqayizivele
Amahlamvu ukoma e utamatisi: sezizathu ezinkulu
Indlela ukupheka isobho inkukhu imilenze?
Kuziwa SMS ( "megaphone"): izimbangela. Ukusekela "megaphone"
Indlela ukuxhuma ifoni yakho ku-PC yakho nge-Wi-Fi? Indlela ukuxhuma smartphone yakho kwikhompyutha yakho nge-Wi-Fi
Amakhekhe phezu kwamanzi: okusheshayo, esiphundu, ezishibhile
Ukutshala Tulips ekwindla eSiberia? Kulula kanjalo nje!
Zovirax: Umhlahlandlela, ukubuyekezwa, izincomo
Thuthukisa ingane: toilet paper yezandla
Kanjani ningi nyaka wachitha esiqhingini eRobinson Crusoe? Isifingqo inoveli